Daawo Sawirada Xildhibaano Kuraas isla dhacay xili ay lahaayeen Dood kulul iyo dhaawacyo ka dhashay gacan ka hadalkaasi - Wargeyska Faafiye
Home 2015 January 20 .Warka Daawo Sawirada Xildhibaano Kuraas isla dhacay xili ay lahaayeen Dood kulul iyo dhaawacyo ka dhashay gacan ka hadalkaasi
January 20, 2015 · by	Liban Farah ·
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Dalka Nepal ayaa kuraas iyo mikirifoono isla dhacay xili ay lahaayeen kulan Xasaasi ah oo ay uga doodayeen wax ka badal lagu sameeyo Dastuurka Dalkaasi.
Kulanka ayaa mar qura isku badalay foodo iyo buuq waxaana kulanka Baarlamaanka ka bilowday dagaal gacan ka hadal ah oo dhaxmaray Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Dalkaasi oo kala taageersan labo xisbi Siyaasadeed.
Inta la xaqiijiyay waxaa kuraasta iyo waxyaabaha kale ee Xildhibaanada isla dhaceen ka dhashay dhaawacyo soo gaaray ilaa 6-Mudane uu ku jiro Hogaamiyaha a Xisbiga Nepal’s ruling party ninka lagu magacaabo Khadga Prasad Oli,.
Baarlamaanada Wadamada Caalamka ayaa mararka qaarkood waxaa ka dhac dhaca gacan ka hadal iyo in la isku garaaco kuraas , waxaana Dagaalka nuucan ah mar kusoo caan baxay Baarlamaanka Soomaaliya oo marar badan kuraas isla dhacay.
Pervez Musharraf oo loo xiray Dilkii Benazir Bhutto.
Winning lottery ticket sold in Maryland
Xasan Daahir Aways oo ka digay dastuurka.